Mpanamboatra sy mpamatsy tariby karazana China U | Shoufan Metal
Ny tariby miendrika U dia mampiasa tariby vy ambany karibonetra ho fitaovana manta, ary ny vokatra dia miondrika amin'ny endrika U amin'ny alàlan'ny teknolojia, izay mety amin'ny fametahana sy fitsitsiana fotoana. Ny amplitude miendrika U dia azo fehezina malalaka, ary ny habe manokana dia mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa.
Ny tariby miendrika U dia mampiasa tariby vy ambany karibonetra ho fitaovana manta, ary ny vokatra dia miondrika amin'ny endrika U amin'ny alàlan'ny teknolojia, izay mety amin'ny fametahana sy fitsitsiana fotoana.
Ny amplitude miendrika U dia azo fehezina malalaka, ary ny habe manokana dia mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa.
Ny tariby miendrika u dia misy gloss ambonimbony, tariby miendrika U miorina sy zinc zinc dia mitovy, adhesion mahery ary fanoherana ny harafesina; PVC mifono U misy tariby miendrika U dia manana fanoherana mahery vaika sy fanoherana ny famaky, izay nahazo ny fandraisana tsara tamin'ny indostrian'ny fananganana.
Material: tariby vy ambany karbaona Q195
Toetra mampiavaka azy: ny velarantany dia manana gloss tsara, fanamiana sosona zinc, firaiketam-po mahery, hery fanoherana maharitra.
Fisokajiana: tariby miendrika U miloko annealed mainty, tariby miendrika U miloko, tariby miendrika U mamirapiratra, tariby miendrika plastika (PVC) U miendrika vy, tariby miendrika U tsy misy vy, sns.
Diameter: 0.5mm-1.5mm, halava 250mm – 600mm.
Izy io koa dia azo namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa.
Ny tariby miendrika u dia ampiasaina indrindra amin'ny famehezana ny rebar amin'ny indostrian'ny fananganana
fampiasana: ampiasaina matetika ho tariby mamatotra amin'ny fanamboarana, na ampiasaina amin'ny fambolena fitaovana na fampiasana isan'andro.
Fomba fonosana: Amin'ny ankapobeny anaty fonosana, izany hoe ireo vokatra vita amin'ny landy miendrika U dia fehezam-boninkazo fohy. Ny baoritra sy ny sarimihetsika plastika dia voafantina araka ny halavany sy ny hatevin'ny tahony tsirairay. Nosokafana tao anaty baoritra ilay horonantsary plastika ary apetraka tsirairay ny tariby voafatotra, alamino tsara izy ireo, apetaho tsara ary fenoy; rehefa voky izy ireo, fonosy tsara amin'ny sarimihetsika plastika, aforeto ireo sarimihetsika plastika tafahoatra, ary farany asio tombo-kase amin'ny plastika.
fonosana: 20kg / baoritra, 1000kg / pa, ao anaty lamba hessian plastika any ivelany na manenona lamba any ivelany, na araka ny fangatahan'ny mpanjifa
Ny halavan'ny tariby
25cm-65cm na araka ny mpanjifa
Previous: Tariby tapaka
Manaraka: PVC mifono tariby
Tariby kely coil